Nhau - Musuki wemvura unobatsira here? Nei uchiisa PP donje pakutanga? Xinpaez anotora iwe kuti unzwisise iyo pp donje firita
Mune mazhinji emidziyo yekuchenesa mvura, yekutanga-nhanho firita chinhu chePP donje firita chinhu. Yekutanga-nhanho firita element haingori chete inokanganisa iyo mhando yemvura, asi zvakare inokanganisa inotevera inotevera-nhanho kana ina-nhanho filtration mhedzisiro uye hupenyu hweiyo firita chinhu, saka PP Hunhu hwekotoni firita chinhu chinonyanya kukosha kune iyo munatsi wemvura.
1. Chii chinonzi PP donje firita? Ndezvipi zvakanakira?
PP donje firita eremendi: isina-chepfu uye isina kunhuwa polypropylene chidimbu, iyo tubular firita chinhu icho chakakuvara uye chakasungwa kuburikidza nekupisa, kusungunuka, kutenderera, kudhonza, uye kugamuchira kugadzira. Kurongeka kwepamusoro kwekusefa kunogona kusvika 1 Micron. Maumbirwo echinhu chesefa chinosvinwa kubva kunze kusvika padanho remukati. Iyo padyo nepakati pemukati mechinhu chesafa chinhu, idiki saizi yepore uye nekukwirisa kunyatso kwefaera. PP donje rine hunhu hombe kuyerera, ngura kuramba, kumanikidza uye yakaderera mutengo. Inonyanya kushandiswa kuvharira zvidimbu zvakakura zvakaita ngura, sediment, uye chinhu chakamiswa mumvura.
1. Makemikari kugadzikana kwePP donje yakanaka kwazvo. Iko kugadzikana kwemakemikari kwePP donje kwakanaka kwazvo. Kunze kwekukanganiswa neakaomeswa sulfuric acid uye yakadzika nitric acid, haina chemakemikari inopindirana nemamwe makemikari vamiririri. Naizvozvo, inogona kuramba acid, alkali, organic solvents nemafuta pasina kunetseka nezve yayo yechipiri kusvibiswa.
2. Hapana njodzi yekusvibiswa nedzimwe mbishi panguva yekubatanidza kwePP donje firita cores. Iko kusunganidzwa kwePP donje firita cores hakudi kushandiswa kwezvimwe zvinhu. Zvinoenderana nehukama hwayo uye nekukochekedzana pamwe chete kugadzira mafirita emhando yemhando dzakasiyana. Pane njodzi yekusvibiswa nezvimwe zvigadzirwa.
3. PP donje firita haidi masimba emagetsi kumanikidza. Munguva yekuzvishingisa kuita-kweatatu, iyo-yakasarudzika labyrinth microporous chimiro inoumbwa, iyo ine hombe nzvimbo yepamusoro uye yepamusoro porosity. Izvi zvinobvumira iyo PP donje firita kuti ive neakawanda huwandu hwetsvina, uye panguva imwechete inobvumira mvura kuti ipfuure nepakati nekukurumidza pasina kudiwa kwekuwedzera kumanikidza kwekusimudzira michina. Izvi zvinoreva zvakare kuti iyo PP donje firita chinhu hachidi kuwedzerwa simba.
4. 80% yezvisina kuchena ndeye PP donje yakawanda-yakasara firita dhizaini mune iyo PP donje firita, yega yega inogona kukamura nekuchengetedza tsvina mumvura. Iyo tambo dziri muchikamu chekunze dzakakora, iyo tambo mukati mehwindo yemukati yakatetepa, iyo yekunze yakasununguka, uye iyo yemukati yakatetepa, ichiumba multilayer gradient chimiro. Neichi chimiro chakasiyana-siyana, iyo tsvina yekubata inokwanisa kuve yakakura, uye makumi masere kubva muzana emarara akasvinwa nemunatsi wemvura anopedzwa muPP donje firita.
Aya ari pamusoro mana mapoinzi zvakanakira iyo PP donje firita mune yekuchenesa mvura. Uye zvakare, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti hupenyu hwehupenyu hwePP donje firita inowanzo kuve mwedzi 3-6, uye inofanirwa kutsiviwa nguva zhinji kuve nechokwadi chekuchenesa mvura. Mari yePP donje yakaderera, uye inowanzo shandiswa mumutsara wekutanga nehuremu hwakanyanya hwekutsiva frequency kuti uwane mhedzisiro yekudzikisa mutengo.
2. Ungaziva sei mhando yePP donje firita?
Hunhu hweiyo PP donje firita inoonekwa nekusunga kwetambo dzayo. Iyo yemukati tambo dzemhando yepamusoro PP donje firita yakasimba uye yakafanana, uye mutsauko uyu haugone kuonekwa neziso rakashama panguva yekutenga. Tinofanira kusiyanisa sei?
Kutanga: tarisa huremu. Tinogona kuyera huremu nemaoko edu. Iyo inorema kurema, inowedzera iyo fiber density yeiyo firita chinhu uye zvirinani iro mhando.
Chechipiri: tarisa pane izvo zvinyorwa. Paunenge uchisarudza chinhu chesefa, iwe unofanirwa kuve netariro nezve izvo zvinhu zvesefa chinhu. Ruvara rwenguva dzose firita pepa rakafanana uye pepa pepamusoro rakatsetseka. Ruvara rwefaira resafa rezvakaderera firita chinhu hachisi yunifomu, uye maratidziro acho haana kunaka.
Chechitatu: tarisa kuomesa. Kazhinji, iyo yakakura sefa ye fiber yeiyo firita chinhu, zvirinani kumanikidza kuita, uye zvirinani kunaka kweiyo PP donje firita chinhu. Tinogona kutonga nekubata. Iyo yakasimba iyo yekubata, zvirinani iko kumanikidza kuita.
Chechina: tarisa colloid. Iyo yakajairwa firita element ine yakanaka gel mhando uye yakanaka elasticity, nepo yakaderera firita element rabha iri yakapfava uye ine yakashata mameseji.
3. Maitiro ekuona kana iyo PP donje firita inoda kuchinjwa? Chii chinofanirwa kutariswa pakutora PP donje?
Iyo nyowani PP donje firita yakachena. Iwe unogona kusiyanisa kana iyo mhando yemvura yakasviba kana yakashata nedhigirii remuviri mutema mushure mePP donje yashandiswa.
Ongorora: Iyo firita chinhu chinofanirwa kubviswa mushure mekumisikidzwa. Iyo yenguva yekutsvaira nguva inofanira kuve inopfuura maminetsi mashanu.
Iyo PP yedonje firita chinhu ndeyeye yekutanga nhanho firita chinhu chemunatsi wemvura. Izvo zvakasviba zvakanyanya zvakasvinwa, zviri nyore iyo firita chinhu kuvharika. Naizvozvo, hupenyu hwePP donje firita chinhu ipfupi kwazvo. Iyo nzvimbo ine yakashata yemhando yemvura ingangoda kutsiviwa mumwedzi mitatu. Nzvimbo ine mhando yemvura iri nani haifanire kudarika mwedzi mipfumbamwe pakureba.
Uye zvakare, kutsiva kwefaera chinhu kuri nyore, uye vashandisi veAspline vane simba-ruoko kugona vanogona kutsiva zvinoenderana nebhuku rekuraira, iro rinogona kuiswa risina tenzi, uye rinogona zvakare kuchengetedza huwandu hwemitengo.